भारतबाट भाले गोही ल्याउने तयारी हुँदै » खबरहरुको एउटै केन्द्र
भारतबाट भाले गोही ल्याउने तयारी हुँदै
शुक्रबार, असार ९, २०७४ १३:२८ मा प्रकाशित !
चितवन, असार ८ गते। राप्ती र नारायणी नदीमा प्राकृतिक रुपमा प्रजननमा सहयोगी मानिएको एकमात्र भाले घडियाल गोही मरेपछि भारतीय सीमा क्षेत्रबाट भाले गोही ल्याउनका लागि पहल थालिएको छ । भाले गोही मरेसँगै सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको गोहीको प्रजननमा समस्या देखिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले कर्णाली नदीमा बर्दियाको सीमा क्षेत्र कतर्निया घाटबाट भाले गोही ल्याउन पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
गत महिना भाले गोही मरेसँगै आफूले उत्तर प्रदेश वन विभागका अतिरिक्त सचिव आषिश तिवारीसँग टेलिफोनमा यस विषयमा कुरा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत बेदबहादुर खड्काले हालसम्म नेपालका नदीमा एक हजार २४६ वटा गोही प्रजनन केन्द्र कसरामा हुर्काएर छाडिएको भए पनि सन् २०१६ मा गणना गर्दा नेपालका नदीमा १९८ वटा गोहीमात्र फेला परेका बताउनुभयो । जसमध्ये राप्ती र नारायणीमा मात्र १६६ वटा गोही फेला परेका थिए ।
गोहीले सामान्यतयाः ३० देखि ३२ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा अन्डा पार्ने गर्छ । प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले भन्नुभयो – “३१ दशमलव ६ डिग्रीमा पारिएका अन्डाबाट केही भाले निस्कने भए पनि तापक्रम तलमाथि भएमा पोथीमात्रै निस्कने गर्छ ।” त्यो तापक्रम मिलाउन आफँैमा कठिन हुने भएकाले पनि पोथीमात्र कोरल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
PREVIOUS POST Previous post: सामूहिक बलात्कार गरेका चार युवक पक्राउ
NEXT POST Next post: मतदान गर्न जाने यात्रुलाई सहज भयो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, असार ९, २०७४ १३:२८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, असार ९, २०७४ १३:२८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, असार ९, २०७४ १३:२८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, असार ९, २०७४ १३:२८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, असार ९, २०७४ १३:२८